Mpianatra amin’ny kilasy antenantenany Tsy hisy fanadinana 3 volana fahatelo ?
Niantso ny mpampianatra rehetra hanohy ny asa hanatanterahana ny fanadinam-panjakana filohan’ny sendikan’ny Mpampianatra ANEFFA, Elidio Randrianjafy afak’omaly.
Fakana ny mety ho toromariky ny mpampianatra no tena ataon’ny mpianatra ho an’ny kilasy antenantenany, fa raha ny fiverenan’ny fampianarana, dia toa mbola sarotsarotra ihany, ka indray mandeha isan-kerinandro eo no maka vaovao.
Amin’ny ankapobeny dia lehilahy no betsaka miasa amin’ireny ivontoerana ireny noho ireo antony maro samihafa. Mba ho fanajana ny zon’ny vehivavy, indrindra tsy hisian’ny mizana tsindrian’ila eo amin’ny roa tonta dia nentin’ny orinasam-pifandraisana Airtel nitsidika ny “Data Center” ivontoerana misy azy ireo eny Ankorondrano ireo mpianatra ireo ao amin’ity CEG iray ity. Am-polony izy ireo no nahazo tombontsoa nanovo fahalalana sy nametra-panontaniana manokana momba ny fikarakarana ny lafiny serasera eto amintsika izay marihina fa anisan’ny asa tena mananosarotra tokoa nefa mahafinaritra. Tanjona ny hahafahan’ireo ankizy mpianatra mahalala sahady ny tontolon’ny serasera sy ny fivoaran’ny teknolojia avo lenta eto amintsika mba tsy ho latsa-danja amin’ny any ivelany. Tafiditra tao anatin’ny fankalazana ny andron’ny 8 martsa ny hetsika.